नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): 'हरेक नेपाली र हिन्दू नारीले आफ्नो श्रीमानले मदिरा नखाओस् भन्ने चाहन्छन्, म पनि त्यही चाहन्छु' - पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह
'हरेक नेपाली र हिन्दू नारीले आफ्नो श्रीमानले मदिरा नखाओस् भन्ने चाहन्छन्, म पनि त्यही चाहन्छु' - पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह
फेरि युवराज्ञी भइएला भन्ने लागेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा हिमानीले ससुरा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा भनिन्, 'यो त जनताले गर्ने फैसला हो । जनताले दिने फैसला हामीले मान्नुपर्छ ।'
- भुवन शर्मा-
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले नयाँ पत्रिकालाई जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता दिएकी छन् । अन्तर्वार्तामा उनले श्रीमान् पारसबारे मिडियामा नकारात्मक समाचार आउँदा दुःख लाग्ने गरेको बताएकी छन् । मिडियाले सत्यतथ्य नबुझी समाचार बनाउने गरेको उनको आरोप छ । उनले श्रीमान्ले मदिरा सेवन गर्न छाडे हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि खुलस्त पारेकी छन् । 'हरेक नेपाली र हिन्दू नारीले आफ्नो श्रीमान्ले मदिरा नखाओस् भन्ने चाहन्छन्, म पनि त्यही चाहन्छु,' उनको भनाइ छ । पुल्चोकस्थित हिमानी ट्रस्टको कार्यालयमा अन्तर्वार्ता दिँदा उनी आत्मविश्वासपूर्वक बोलिन् र वेलावेलामा यो पनि भनिन्, 'मनमा लागेको कुरा ढुक्कसँग सोध्नुहोस् ।' उनीसँग ट्रस्टका सचिव पावना शाह र सदस्य पनि थिए । हरेक प्रश्नको उत्तर उनले ती सदस्यहरूलाई हेरेर दिने गर्थिन् । ट्रस्टका कर्मचारीले भने राजनीतिक विषयमा प्रश्न नगर्न आग्रह गर्दै थिए । तैपनि हिमानीसँग केही राजनीतिक प्रश्न पनि सोध्ने कोसिस नयाँ पत्रिकाकर्मीको थियो । तर, उनले राजनीतिसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नमा कूटनीतिक जवाफ दिइन् । 'नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राजनीति अघि बढेको छैन । आमनेपाली जनता यसमा दुःखी छन् । म पनि त्यसरी नै दुःखी छु,' सामयिक राजनीतिप्रति उनको
who is the present princess?....aprincess is always princess there is no former princess... she is always the princess of our proud kingdom. the queen of england is not known as the former queen... she is also always princess